May 2021 – Sivubela intuthuko Newspaper
MAGAYE CELE LOYO owayeyisiqongqwane sasemva seqembu labangaphansi kweminyaka engu-23, laseNingizimu Afrika amaGlug Glug, uMatthew Booth useluleke uBenny MCcarthy ukuthi angajahi ukuyoqhoqhobela isikhundla sokuqeqesha iqembu lesizwe…
TSEPO MOTLOKOA KUTUSWE iqhaza laBangani Bikers Association in KwaZulu-Natal ngokuthi bethi bedlala ngezithuthuthu kodwa babuye babheke emphakathini belule isandla lapho benamandla khona. Abangani bahambele eChibelihle Combined…
MAGAYE CELE UMEYA woMkhandlu weTheku, uKhansela Mxolisi Kaunda wethule ngokuasemthethweni iphrojekthi yokuthuthukisa kabusha indawo yaseZimbuzini eMlazi eningizimu yeTheku. UKhansela uKaunda udalule ukuthi basebenzise imali…
MAGAYE CELE ISIFUNDA, ILembe libungaze usuku olumqoka olumayelana nokugqugquzela ukungahlukunyezwa kwabantu abathandana nobulili obubodwa. Lolu suku lubizwa ngokuthi yi-International Day against Homophobia, Interphobia,…
TSEPO MOTLOKOA UNDUNANKULU waKwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala uthi uma ingathathelwa phezulu eyokuguquguquka kwesimo sezulu kusenesikhathi isifundazwe sizozithola sibhekene nengwadla kwezomnotho okufana nokuye kwenzeka njengoba…
MAGAYE CELE KUNTWELA ezansi ngengqophamlando okubonakala izokwenziwa ngamaqembu amabili aKwaZulu Natal okungamaZulu Fc kaMnuz Sandile Zungu kanye neLamontville Golden Arrows kaManto Madlala. Lawa maqembu aKwaZulu Natalal abonakala…
TSEPO MOTLOKOA UCHONYWE uphaphe legwalagwala owesifazane osemncane waseMgungundlovu oqunge isibindi wavula inkampani ekhiqiza izibulali-magciwane nemikhiqizo yokuhlanza enhlobonhlobo okungaba izitsha, izimoto nezindlu phansi. UMnu…
MAGAYE CELE IMEYA yoMkhandlu weTheku, uKhansela uMxolisi Kaunda ihambele umphakathi waseMnini, eMgababa ngenhloso yokuxhumana nalo mphakathi mayelana nohlahlomali olusahlongozwa luka-2021/2022. UKhansela uKaunda ukhulume…